कार्यकर्ताहरु | विश्व विनोद
हास्यव्यङ्ग्य विश्व विनोद December 3, 2021, 4:52 pm
ओई यार, मन्त्रीले कार्यक्रममा बोलाएको छ, बाईक लिएर चोकमा आईज... यौटाले भन्यो । अर्कोले पनि यस्तै खबर पायो, फलानो फलानो सबैले मन्त्रीको कार्यक्रममा जम्मा हुने निम्तो पाए पछि सबैजना चोकमा जम्मा भए । अनि त्यही हुलको एक जनाले एक झोला झण्डा लिएर आएर सबैलाई बाँड्यो । त्यो हुलका सबैले आफ्ना बाईकमा दुई तर्फ झण्डा हालेर बाँधे अनि एकै छिनमा मन्त्री आएपछि ती जल्दा बल्दा युवाको हुल मन्त्रीको पछि पछि लाग्यो । साईलेन्सर हटाएका बाईकले भ्वाँ भ्वाँ पारेर सहर नै थर्काएर ढिस्कानो पार्टीको बिज्ञापन बजारबासीलाई गराईयो र ढिस्कानो पार्टी पनि यो शहरमा दरिलो उपस्थिती रहेको कुरा हुलको नारा र बाईकको भ्वाँ भ्वाँ आवाजले दिलाई रहेको थियो ।
कार्यक्रममा वाद, सिद्धान्त, आदर्शका कुरा भए, ति बाईकमा सबार युवाहरु हातमा सुर्ती मोलेर बसिरहे । ताली बजाउनु पर्ने ठाउँमा अधिकांश युवा ताली बजाई रहेका थिएनन् बरु फगत सुर्ती मोलीरहेका थिए । नेताले भाषण ओकल्दै गर्दा तिनीहरु पिच्च थुक्दै थिए । भाषण सकिए पश्चात युवाहरुको हुल मन्त्रीलाई होटल सम्म पु¥याउन पनि पुग्यो । स्वस्थानीको नवराजको राज्यारोहण गरेको झैं नेताज्यूको जयजकारमा ती बाईकबाला युवाले कुनै कमी हुन दिएनन् । बदलामा त्यो रात खानपानको व्यबस्था मन्त्रीको बाहुलीबाट भयो ।
आखिर अधिबेशन चलेको रहेछ पार्टीको । मन्त्री ज्यू नै चुनाव हार्ने भएपछि युवालाई हात लिएका रहेछन् । कसैलाई हप्काउने, फकाउने र सम्झाउने काम पनि त्यही युवा जमातले पायो । उसो त त्यो हुलका केही युवा त जिल्ला अधिबेशनमा भोट हाल्न पाउन योग्य पनि थिए । रात बित्दै गयो, मातको नशा बढ्दै गयो । सबै युवाहरुले होश गुमाएर बेहोस भै सकेका थिए ।
भोली पल्ट चुनावको तालिका थियो । त्यही युवाको टोली मतदान स्थल तर्फ गएर प्रचार प्रसार पनि ग¥यो । दुई तीन जनालाई अघिल्लो दिनको मातले अझै नछोडेकोले खाटमै पल्टिई रहेका थिए । भोट हाल्ने बेला भए पछि उनीहरुलाई पनि मतदानस्थलमा बोलाईयो । तर ति अबेर सम्म सुत्नेले सोधे — हैन सोल्टी, भोट कस्लाई हाल्ने हो ? मेसो मेलो नै भएन ......
अघिल्लो हप्ता ढिस्कानो पार्टीको चुनाव सकिएको थियो पछिल्लो हप्ता फलानो पार्टीको पनि अधिबेशन आईसकेछ । यसै गरि चोकमा केटाहरु जम्मा भए अनि ठूलै नेताको पछि लागे । फरक यत्ति थियो, यहाँ मन्त्री थिएनन् तर तिनै बाईकमा तिनै युवा फरक झण्डा बोकेर बजार घुमिरहेका थिए । आहा, दोहोरो फाईदा लिने भनेको यही नै हैन र ? अक्सर आजकाल पार्टीका अधिबेशनको रौनक यस्तै बाईकवाला भाईहरुले बढाईरहेको पाईन्छ । कतै तपाईका कार्यकर्ता यस्ता त परेनन् ?